လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် အမျိုးသားနှစ်ဦး ဇယ်တောက်ခုံ ကြည့်သည့်နေရာလုရင်း စကားများရာမှ ဓားထိုးမှုဖြစ်ပွား – Eleven Media Group
လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် အမျိုးသားနှစ်ဦး ဇယ်တောက်ခုံ ကြည့်သည့်နေရာလုရင်း စကားများရာမှ ဓားထိုးမှုဖြစ်ပွား
လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် အမျိုးသားနှစ်ဦး ဇယ်တောက်ခုံကြည့်သည့်နေရာလုရင်း စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ ဓားဖြင့်ထိုးမှု ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ လှိုင်သာယာမြို့နယ် (၂၀) ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သည့် ဒေါ်…..(၄၇ နှစ်) သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက် ညနေ ၃ နာရီ ခန့်က (၂၀) ရပ်ကွက် ဈေးသစ်တွင် ဈေးရောင်းနေစဉ် အဆိုပါဈေးအတွင်း ပျံကျဈေးတန်းတွင် စကားများရန်ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် သွားရောက်ကြည့်ရှုရာ ယင်းနေရာ၌ ၎င်း၏တူဖြစ်သူ ကို…..(၂၀ နှစ်) မှာ ဒဏ်ရာများ ရရှိထားသည်ကို တွေ့ရှိရသဖြင့် မေးမြန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မေးမြန်းရာ ကို….(၂၀ နှစ်) မှာ အဆိုပါ ပျံကျဈေးတန်းနေရာ၌ ကစားနေသည့် ဇယ်တောက်ခုံအား ကြည့်နေရာမှ ကိုထက်ဆိုသူ နှင့် နေရာလုရင်း စကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ စကားများနေသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများက ၀င်ရောက်ဖျန်ဖြေခဲ့သဖြင့် ပြီးသွား ချိန်တွင် ကို…..(၂၀ နှစ်) က ဇယ်တောက်ခုံ အား ဆက်ကြည့်နေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ ဆက်၍ကြည့်နေစဉ် ကိုထက်ဆိုသူက ၎င်းတွင်အသင့်ယူဆောင်လာသည့် ဓားဖြင့် ကို….(၂၀ နှစ်) အား ၀င်ရောက်ထိုးခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဓားဖြင့်အထိုးခံခဲ့ရသဖြင့် ကို……(၂၀ နှစ်) မှာ ၀ဲရင်ဘတ်ဘက်တွင် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ တစ်ချက်ရရှိကာ လှိုင်သာယာဆေးရုံမှတစ် ဆင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ (စိုးရိမ်ရ) လူနာ အဖြစ် တင်ပို့ကုသထားရကြောင်း သိရသည်။
“ဓားနဲ့အထိုးခံရတဲ့လူနာကတော့ အခု ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေဆဲပါ။ ကျူးလွန်သူကတော့ ထွက်ပြေးနေတယ်။ သူဘယ်သူလဲဆိုတာတော့ သိတာပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ အခုထွက်ပြေးနေတော့ လိုက်ဖမ်းနေပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
Posted in CrimeTagged ဓါး
ဂျာမနီဘတ်စ်ကားပေါ်တွင် ဓားဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူကိုးဦးဒဏ်ရာရရှိ
ဂျာမနီမြောက်ပိုင်း၌ ဘတ်စ်ကားတစ်စီးပေါ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးက ဓားဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူ ကိုးဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း၊ တိုက်ခိုက်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကို တိတိကျကျမသိရှိသေးကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။ လူအပြည့်လိုက်ပါလာသည့် ဘတ်စ်ကားသည် ဇူလိုင် ၂၀ ရက်တွင် Luebeck မြို့အနီးရှိ နာမည်ကျော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် နှစ်သစ်ကူးည၌ လူသတ်မှုနှစ်မှုဖြစ်ပွား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် နှစ်သစ်ကူးည၌ လူသတ်မှုနှစ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူသတ်မှုနှစ်မှုမှာ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်နှင့် လှိုင်မြို့နယ်တို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်
ညီဖြစ်သူကို ရန်စ စကားလာရောက်ပြောဆိုပြီး ကားဖြင့်လိုက်တိုက်သူအား အစ်ကိုက ဓားဖြင့်ထိုးသတ်မှု တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ဖြစ်ပွား
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေဖြူမြို့နယ်တွင် ညီဖြစ်သူကို ရန်စ စကားလာရောက် ပြောဆိုပြီး ကားဖြင့် လိုက်တိုက်သူကို အစ်ကိုဖြစ်သူက ဓားဖြင့် ထိုးသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စုံစမ်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်
မိမိအား ဓားဖြင့်ထိုးသူကို ဖုန်းဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ကာ သူငယ်ချင်းများထံ ပေးပို့ခဲ့သဖြင့် တရားခံအား ဖမ်းမိ
မိမိအား ဓားဖြင့်ထိုးသူကို ဖုန်းဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ကာ သူငယ်ချင်းများထံ ပေးပို့ခဲ့သဖြင့် တရားခံအား အမြန်ဆုံးဖမ်းမိခြင်းဖြစ်ကြောင်း အသတ်ခံရသူ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် လူငယ်၏ ဆွေမျိုးများထံမှ သိရသည် ။ လွိုင်ကော်မြို့ ဒေါဥခူရပ်ကွက်နေ ဖိုးခွား (ခ) အာကာဝင်း
လမ်းပေါ်တွင် ရမ်းကားနေသည့် လူငယ်သုံးဦးကို တားဆီးစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ဓားဖြင့်ပြန်လည်ခုခံမှုကြောင့် ရာဘာကျည်ဖြင့် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး
လမ်းပေါ်တွင် ရမ်းကားနေသည့် လူငယ်သုံးဦးကိုတားဆီးသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ဓားဖြင့်ပြန်လည်ခုခံသဖြင့် ရာဘာကျည်ဖြင့် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ မတ် ၁၂ ရက် ညက ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်ပိုင်း) ပြည်မြို့ အမှတ် (၃) နယ်မြေ ရဲစခန်းအပိုင် အောင်လံ-ပြည်